Misy Mitatitra Fa Novonoin’ny Fitondrana Ilay Syriana Mpanao Sariitatra Akram Raslan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Desambra 2013 22:29 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, македонски, Ελληνικά, Italiano, বাংলা, Nederlands, فارسی, Български, English
Mbola mitohy ny fintaintainana momba ny tsy fahafantarana izay manjò ilay Syriana mpanao sariitatra Akram Raslan, nandrombaka ny fandresena tamin'ny lokan'ny fahasahiana 2013 teo amin'ny fahasahiana, nosamborin'ny fitondrana Assad tamin'ny Oktobra 2012. Raha misy ny tatitra milaza fa novonoin'ny fitondrana Assad izy taorian'ny kisarintsarim-pitsarana, ny hafa kosa nanambara fa mbola velona izy.
Nosamborin'ny miaramilan'ny fitsikilovana Syriana ilay mpanao sariitatra, raha tao amin'ny gazetin'ny fitondrana Al-Fedaa tao Hama izy tamin'ny 2 Oktobra 2012. Akram, izay nandresy tamin'ny lokan'ny fahasahiana 2013 avy amin'ny Cartoonists Rights Network International (CRNI), dia nisy nitati-baovao fa notsaraina mangingina tsy misy vavolombelona, tsy misy mpisolovava, tsy misy fangatahana fitsarana ambony ary tsy misy fanantenana hahazo ny rariny.
Nahare izahay fa tamin'ny 26 jolay 2013 dia notsaraina mangingina tsy natrehim-bavolombelona, mpiaro, tsy misy fangatahana fitsarana ambony, ary tsy misy fanantenana hahazo ny rariny i Akram sy ireo gadra noho ny fanehoan-kevitra hafa, izay ahitana mpanao gazety, artista, mpihira ary manampahaizana hafa . Avy amin'ny tatitra tsy voamarina sady ambangovangony no nandrenesanay ihany koa fa voaheloka higadra mandra-pahafatiny avokoa izy rehetra.
Fivoriana sy fanehoankerin'ny mpanao sariitatra manerana izao tontolo izao manohana an'i Akram Raslan
05.10.2013, tany St Just Le Martel (France). Loharano: Cartooning for Peace
Nanatsonga ny vaovaon'ny CRNI sady nampiseho ny ahiahiny momba izay manjò an'i Akram ihany koa ny bilaogin-tsariitatra toa ny Comic box resources blog, Cartoon for Peace, The CAGLE Post ary ny The Daily Cartoonist. Toy izao ny fivakin'ny fanehoan-kevitra iray:
Akram, ao anatin'ny vavakay ianao sy ny fianakavianao… Assad, ianao sy ny mitovy aminao… !@#$%^&*
Loharano: pejy Facebook [ar] DTsy hoe isa fotsiny amin'ny tatitra ny gadra sy ny nalaina an-keriny. Nampiasaina noho ny CC BY 2.0
Tamin'ny 18 Oktobra 2013, nanoratra ny Redac_MM : Novonoin'ny fitondrana Syriana ny Mpanao sariitatra be herimpo iray
Malahelo aho manoratra fa nitatitra ny Tambajotran'ny Zon'ny mpanao Sariitatra hoe novonoin'ny fitondrana Syriana ilay mpanao sariitatra Akram Raslan taorian'ny kisaritsarim-pitsarana iray.
Raha nanatsonga hafatra mahery vaika i Syrian Observer : Here There Be Dragons: Any Syria maty i Akram Raslan:
Mety ho afa-manosika ny tsikera, na ny fiokoana eny fa na ny fikasana hamono amin'ny alalan'ny kobay na bala na fampihorohoroana ny olondozabe. Fa mitodika mankaiza kosa ny basin-dry zareo hanakanana ny olona tsy haneso azy ireo? Misy ve ny fomba mahomby kokoa, mahery kokoa, ary tsy mandany vola hanomezana hery ny olona hanala ny tahotra ankoatra ny sariitatra sahisahy mampihomehy amin'ny alalan'ny tahotra?
Iray amin'ny sariitatr'i Akram nahalotika ny fitondran'i Assad. Loharano: Bilaogin'ny Hetsika Sariitatra. Nampiasaina noho ny CC BY 2.0
Ao amin'ny Twitter i Rime Allaf no manoratra:
Aza alatsaka mihitsy ny peninao, ireny no tena atahoran'i Assad indrindra. Mandria am-piadanana Akram Raslan, mpahay tantara an-tsary novonoin'ny fitondrana Assad.
Ao amin'ny Facebook, Alisar Iram mampiseho firaisankina:
Akram Raslan, na maty ianao na velona, mahatsiaro anao sy mankafy anao izahay.
Raha mamehy izany amin'alahelo sy fanantenana kosa ny Syrian Observer:
Miala tsiny aho tsy nahatratra ny lavaka ary nanala anao tao ry Akram. Miangavy anao mamelà ahy. Angamba ny sorona nataonao no hanetsika anay hijery amin'ny fitaratra indray, ary hanontany hoe aiza izahay no miampita ny tsipiky ny tahotra mankany amin'ny fahasahiana ary mihaika anay, indray, handray dingana vaovao.